Dowladda oo sheegay in duqeyn lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Dowladda oo sheegay in duqeyn lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Ciidanka Kumaandooska xoogga Dalka oo kaashanaysa Taliska Ciidanka Africom ayaa duqeyn cirka ah u gaystay warshad ay lahaayeen Alshabaab oo qaraxyada lagu farsameeyo islamrkaana lagu kaydiyo kuna taalay agagaarka Degmada Jilib ee Gobolka Jubada dhexe.
War kasoo baxay taliska Ciidanka xooga dalka ayaa waxaa lagu sheegay in qiimayn hordhac ah oo la sameeyey ay sheegeeyso in duqeynta lagu dilay 10 -tirsan Al-Shabaab.
“Warshadan ayaa caan ku ahayd soo saaridda qaraxyada ismiidaaminta ee ay Alshabaab ku dhibaateeyaan Ummadda Soomaaliyeed, waxaana u jeedku ahaa in aan burburino ayaa lagu yiri” Warka kasoo baxay taliska Ciidanka xoogga dalka.
Sidoo kale taliska Ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in, iyaga oo kaashanaya Africom ay ka go’antahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo ururada kale si loo badbaadiyo shacabka aan waxba galabsan ee ah rag iyo dumar iyo carruur ee ku sugan Soomaaliya iyo waddamada deriska la ah.
Mareykanka oo kaashanaya Ciidamada dowladda ayaa mararka qaar duqeymo ka fuliya degaanoa ka tirsan gobolada dalka, waxaana duqeyntaan ay kusoo aadeeyaa xilli mareykanka uu dhawaan sheegay in Ciidamadiisa uu kala baxayo Soomaaliya.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo Maanta ku wajahan Magaalada Garoowe
Next articleDhageyso:-Taliyaha xoogga oo shaaciyay dadka ka dambeeya saraakiishii la dilay